တရုတ်ကြိတ်စက် FW-09 စီးရီးစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ TAA
ကျွန်ုပ်တို့၏ super-hard alloy tools များကိုကြေးနီဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ စိန်တစ်လွှာသည်သတ္တုအစုအဝေးအားသတ္တုအလွှာနှင့်အခိုင်အမာ welded လုပ်သည်။ ဤအမျိုးအစားတွင်ကြိတ်ခွဲမှုမြင့်မားခြင်း၊ သက်တမ်းကြာရှည်ခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ လက်ရှိအစေးနှောင်ကြိုး corundum ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် polishing tools များ, ကြမ်းနှင့်အလတ်စားကြမ်း - စပါးကို electroplated စိန်ကိရိယာများနှင့်အချို့သောပူ - ဖိ sintered စိန် tools တွေကိုအစားထိုးအဓိကအား။
ရိုးရာဖြတ်တောက်ခြင်း disk ထက် ၃၀% မှ ၅၀% ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေသည်
နံပါတ် ရုပ်ပုံ Sပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Rotary မြန်နှုန်း（r / min） Application Performance နှိုင်းယှဉ်
FW100-09 100x16 12000 သံသတ္တုများပုံသွန်းခြင်း (bectile cast, Grey Cast သံ) \_ t 1. သံသတ္တုများပုံသွန်းသောမျက်နှာပြင်ကိုကြိတ်ခွဲခြင်း၊ TAA သည်အစေးပြားထက်အဆ ၇၀ ကျော်ပိုများပြီး၊
2. သံမဏိကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံဂဟေဆော်သောနေရာတွင် TAA သည်အစေးဓါတ်များထက်အဆ ၄၀ ပိုမြန်သည်။
3. ဖန်ထည်ဖန်ကြိတ်ခြင်း၊ TAA သည် resin disk ထက်အဆ ၄၀ ပိုမြန်သည်။
4. ကြွေထည်ကြွေထည်ကြွေထည်ကြွေထည်ပစ္စည်းသည် TAA သည်အပူပေးစက်ဖြတ်စက်ထက် ၃ ဆပိုမိုထိရောက်မှုရှိပြီး ၁၀၀% တိုးသည်။
ကြေးနီနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ စိန်ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့မကျစေပါ
Disc ကြိတ်ထောင့် Angle Grinder
Carbide ကြိတ် Disc
စိန် Coated ကြိတ် Disc
Drill Bit ကြိတ်ဘီး
Flap Disc ကြိတ်ဘီး
ကြိတ်ဆုံကြိတ်စက် \_ t
ကျွန်ုပ်တို့၏ super-hard alloy tools များကိုကြေးနီဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ စိန်တစ်လွှာသည်သတ္တုအစုအဝေးအားသတ္တုအလွှာနှင့်အခိုင်အမာ welded လုပ်သည်။ ဤအမျိုးအစားတွင်ကြိတ်ခွဲမှုမြင့်မားခြင်း၊ သက်တမ်းကြာရှည်ခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ လက်ရှိအစေးနှောင်ကြိုး corundum ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် illustrating tools တွေကို, အားလုံးကြမ်းနှင့်အလတ်စားကြမ်း - စပါး electroplated စိန်ကိရိယာများနှင့်အချို့သော ... အစားထိုးအဓိကအား